OPPO A31 – Get More with OPPO A31 | OPPO Myanmar
Get More with OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 16.5cm (6.5") Waterdrop Screen
ဆန်းပြားသော အတွေ့အကြုံ သုံးခု
မည်သည့်အချိန်အခါတွင်မဆို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးမည့် ကင်မရာ
12MP သုံးလုံးတွဲ ကျောဘက် ကင်မရာ
OPPO A31 ၏ ကင်မရာသုံးလုံးက သင့်ကို ယခင်တွင် မရရှိခဲ့ဖူးသည့် အတွေ ့အကြုံသစ်ပေါင်းများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ 12MP ပင်မကင်မရာက သင့်ပုံရိပ်တခုလုံးကို အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင် အာရုံစိုက်ဖမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး မိုက်ခရိုကင်မရာများမှသင့်ကို အသေးစိတ်ကျကျ zoom ဆွဲ၍ တိကျပြတ်သားမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို့အပြင် depth ကင်မရာ၏ ပုံဖော်နိုင်မှုအစွမ်းက သင့်အလှဓါတ်ပုံကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အလှအပတရားကို အကောင်းဆုံး အာရုံစိုက်ပေးနိုင်ခြင်း
အလှဓါတ်ပုံများအား ပိုမိုကြွရွ အသက်ဝင်စေခြင်း
ဖုန်း၏စက်ပိုင်းအဆင့် Bokeh effects က ဖုန်းနောက်ခံပုံရိပ်များကို ဝေဝါးအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်အလှဓါတ်ပုံများအား ပိုမိုကြွရွ အသက်ဝင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ရာပေါင်းများစွာသော ဓါတ်ပုံများကို အသေးစိတ်သုတေသန ပြုချက်များအား အခြေခံကာ အနုပညာရသ အပြည့်အဝပေးနိုင်စေဖို့ အလှဓါတ်ပုံရိုက်သည့် စိတ်ကြိုက်စတိုင်ပုံစံ ၅ မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပိုမိုနီးနီးကပ်ကပ် zoom ဆွဲကြည့်ရအောင်
မိုက်ခရိုမှန်ဘီလူးက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုအသေးစိတ်ကျကျနီးနီးကပ်ကပ်ရိုက်ယူပေးနိုင်ပါသည်။ မြက်ဖျားပေါ်ရှိ နှင်းရည်စက်လေးမှ ပွင့်ဖူးနေသော ပန်းပွင့်လေးအထိ OPPO A31 က သဘာဝမိခင်ကြီး၏ ကွယ်ဝှက်ထားသော အလှတရားကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပိုမိုတောက်ပရွှန်းစိုသော ရိုက်ချက် Dazzle Color Mode
OPPO A31 တွင် ပစ်ဇယ်တစ်ခုချင်းစီ ခြေရာခံကာ အရောင်အသွေးများကို ချိန်ညှိပေးနိုင်သဖြင့် ဓါတ်ပုံရုပ်ထွက်ကို ပိုမိုတောက်ပစေပါသည်။ Dazzle color mode သည် အရောင်အသွေးလှပသော အရာများကိုသာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပုံရိပ်အားလုံးအား ပိုမိုတောက်ပရွှန်းစိုအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
ဆယ်ဖီဓါတ်ပုံများအား အလှပြင်ဆင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်
AI နည်းပညာသုံး အလှပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည့် 8MP ရှေ့ကင်မရာ
ပိုမိုသဘာဝကျပြီး ပိုမိုလှပသော ဆယ်ဖီဓါတ်ပုံများကို အရယူလိုက်ပါ။ OPPO A31 ၏ AI နည်းပညာသုံး အလှပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည့် 8MP ရှေ့ကင်မရာက သင့်အသက်အရွယ်နှင့် ကျား၊မ စတာတွေကို အလိုအလျောက် ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပြီး အနုစိတ်ခြယ်သခြင်းနှင့် အသားအရည် စသည်တို့ကို သဘာဝကျပြီး လိုက်ဖက်သော ပြင်ဆင်မှုများကို စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထူးခြားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံသစ်
6.5 လက်မရှိသော မျက်စိထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသော ရေစက်တွဲလွဲခိုသည့်ပုံစံမျက်နှာပြင်
ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်သော OPPO A31 နာနိုနည်းပညာသုံး ရေစက်ကလေးတွဲလွဲခိုသည့် အဖျားစွန်းသည် အရင်ထက် ၃၁.၄% ပိုမိုသေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင် ပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းများအတွက် အကောင်းဆုံး အတွေ ့အကြုံသစ်ကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့အပြင် OPPO A31 တွင်လူကိုထိခိုက်စေသော အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်သဖြင့် မျက်စိထိခိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပြီး ဖုန်းတစ်နေကုန်အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်မြင်ကွင်းတိုင်း ကာကွယ်ပေးထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နာနိုနည်းပညာသုံး ရေစက်တွဲလွဲခိုသည့် ပုံစံမျက်နှာပြင်
အနုပညာမြောက် 3D ဒီဇိုင်း
OPPO A31 ကို အရောင်၂ မျိုးဖြင့် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော အနက်ရောင်က လမိုက်ညတစ်ည အသွင်ဆောင်ကာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော အဖြူရောင်က နန်းတွင်းအသုံးတော်ခံတော်ဝင်လက်ရာ ကြွေသားအသွင် လှပတင့်တယ်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ OPPO A31 ၏ အနုပညာဆန်သော ဒီဇိုင်းက သင့်ကို အများကြားမှာ ထင်ရှားနေစေမှာပါ။
ထူးခြားပြီး မတူညီသော အထိအတွေ့ခံစားမှု
စွမ်းရည် ၃ ဆ မြင့်မားခြင်း
128GB ROM ၊ ပိုမိုများပြားစွာ သိုလှောင်နိုင်ခြင်း
ဆင်းကတ် ၃ ကတ် စလော့ ( ဆင်း ၂ ကဒ် + 256GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်သော MicroSD)
အလွန်များပြားသော 128GB ဆန့်သည့် ROM က သင့်အား ဓာတ်ပုံစိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုများကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလုတ် လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် OPPO A31 တွင် ကဒ်သုံးခု စိုက်နိုင်သည့် စလော့ (Dual Sim + MicroSD ) အတွင်းတွင် 256GB အထိ မမ်မိုရီများကို ထပ်တိုးနိုင်ပါသည်။
ဆင်း ၂ ကဒ် + မိုက်ခရို SD ကဒ်
4230mAh အထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် ဘက်ထရီသည် ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် သီချင်းနားထောင်ခြင်းများကို တစ်နေကုန်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် HD ဗီဒီယိုများကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ၁၄ နာရီကြာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဂိမ်းကစားခြင်းကို ၇ နာရီကြာ စိတ်ပူပန်စရာမလိုပဲ ဆော့ကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
OPPO A31 ၏ 2.3GHz Octa-Core ပရော်စက်ဆာက ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဗီဒီယို ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်းတို့ကို ပိုသွက်လက်မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရုံမျှမက ပါဝါစားသက်သာအောင်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
UI ဒီဇိုင်း အသစ်အပြင်အဆင်နှင့် ColorOS 6.1 သည် ပိုမိုဉာဏ်ရည်မြင့်မားကာ ပိုမိုညက်ညောသော အချက်ပြလမ်းကြောင်းစနစ်က ပိုမိုကောင်းမွန်သော အတွေ ့အကြုံအသစ်များကို ရရှိစေပါသည်။ Android 9.0 ကို အခြေခံကာ ထူးခြားသည့် ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်အဖြစ် ယာဉ်မောင်းချိန်တွင် အသုံးပြုသည့် Smart Riding Mode7၊ ကိုယ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးအသွင် ကူညီပေးနိုင်သည့် smart assistance၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို လက်ဖြင့်ပွတ်၍ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည့် Swipe-Up Gesture Navigation တို့အပြင် OPPO Cloud ဝန်ဆောင်မှု7ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
ယာဉ်မောင်းချိန်တွင် အသုံးပြုသည့် Smart Riding Mode
အရည်အသွေး အာမခံချက် အပြည့်ရှိခြင်း
OPPO အနေဖြင့် ထုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်သည့် အနေအထား R&D မှ ဝယ်ယူပြီးနောက် ဆက်လက်ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအထိ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ စွမ်းရည်မြင့်မားသော ၉ ခု
ဌာန ၆ ခု
အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် အဆင့်မြင့်ဆုံး အရည်အသွေး
OPPO စမတ်ဖုန်း သင့်လက်ထဲသို့မရောက်မှီ တိကျခိုင်မာသော စစ်ဆေးမှုပေါင်းများကို ပြုလုပ်၍ ကျွန်ပ်တို့၏ စံညွှန်းကို ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရုံမျှမက သင်မျှော်လင့်ထားသမျှကို ဖြည့်စွမ်းနိ်ုင်အောင် အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
နားကြပ် plug in စစ်ဆေးခြင်း
Volume ခလုတ် အသုံးပြုခြင်း
1. 16.5cm (6.5'' ) waterdrop screen of OPPO A31 is the diagonal length of the display when the four rounded corners are taken to be pointed corners (i.e. actual size is marginally smaller).
2. OPPO A31 adoptsatriple rear camera consisting ofa12MP main camera, 2MP macro lens, and 2MP depth camera. The 12MP main camera has an actual output of 12.58MP and produces 4096×3072 resolution images.
3. OPPO A31’s thickness of 8.3mm and weight of 180g are approximate values, taken from OPPO internal tests. Actual product may vary.
4. 3-Card Slot are available only for specific regions and specific versions. Please refer to local specifications. A MicroSD card needs to be purchased separately.
5. 4230mAh is the typical value of battery capacity. The minimum capacity is 4100mAh.
6. OPPO A31 supports 14 hours of online video streaming,7hours of online gaming, and 111 hours of play time for locally stored music.
6a. Online video streaming duration testing was performed withastarting charge of 100% and usinga4G mobile data connection, with the phone’s audio volume adjusted to 72db, the phone’s brightness adjusted to 135lx, and while streaminga1080P video. Actual playback time may vary under different conditions.
6b. Online gaming duration testing was performed withastarting charge of 100% and usinga4G mobile data connection, with the phone’s audio volume adjusted to 72db, the phone’s brightness adjusted to 135lx, and while running Arena of Valor. Actual usage time may vary under different conditions.
6c. Local music duration testing was performed withastarting charge of 100% while in airplane mode and using wired earphones with the volume adjusted to the maximum setting. Actual playback time may vary under different conditions.
7. Riding Mode and OPPO Cloud Service are available only for specific regions. Please refer to local specifications.
8. Product pictures are for reference only. Please refer to the actual product for actual specifications. Certain product specifications and descriptions may change due to reasons like changes in suppliers. The data in the page came from OPPO designed technical parameters, and test data from the laboratories and from suppliers. In actual circumstances, the data will differ slightly, depending on the test software version, specific testing environment, and specific version.